UY Scuti သည် ဧရာမ ကြယ်နီတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲနေသော ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် စကာတန် ကြယ်စုတန်းထဲတွင်တည်ရှိသည်။ ယင်းအား အချင်းဝက် အကြီးဆုံးကြယ်တစ်ခုအဖြစ် သိထားသည်။ တွက်ချက်မှုအရ ယင်း၏အချင်းဝက်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နေအချင်းဝက်၏ အဆ ၁၇ဝ၈ ရှိသည်။ သို့မဟုတ် ၂.၄ ဘီလီယံ ကီလိုမီတာ (၁.၅ ဘီလီယံမိုင်) ဖြစ်ပြီး ထုထည်သည် နေ၏ အဆပေါင်း ၅ ဘီလီယံ ရှိသည်။ ယင်းသည် ကမ္ဘာမှ ၂.၉ kiloparsecs (အလင်းနှစ် ၉၅ဝဝ) ကွာဝေးသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအား ယင်းထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါက ယင်း၏ ဖိုတိုစဖီးယားသည် ဂျူပီတာဂြိုဟ်ပတ်လမ်းထိ ထိုးထွက်နေမည်ဖြစ်သည်။ အချင်းဝက်အား မသိရသော်လည်း စနေဂြိုဟ်ပတ်လမ်းထိ ရှည်လျားနိုင်သည်။
ထုထည် 7-10 M☉
UY Scuti ၏ထုထည်သည် မသေချာပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဟူမူ ယင်းနှင့်အဖော်ကြယ်တစ်စင်းကို မမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖော်ကြယ်ရှိပါက ဒြပ်ဆွဲအားသက်ရောက်မှုဖြင့် ယင်း၏ထုထည်အား တိုင်းတာနိုင်သည်။ UY Scuti သည် အကြီးမားဆုံး ကြယ်များထဲတွင် ပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီး ဘီတယ်ဂျူးစ်ထက် ၁.၇ ဆ ပိုမိုကြီးမားသည်။ ကြယ်သည် အင်မတန်ကြီးမားလှသဖြင့် ကမ္ဘာသည် ၈ လက်မရှိသော ဘောလုံးအရွယ်၊ နေသည် ၇၃ ပေ အချင်းရှိသည်ဟု ယူဆပါက UY Scuti သည် ဧဝရတ်တောင်ထက် ၄ ဆ ပိုမြင့်သည့် ပေ ၁၂၅၀၀၀ အရွယ်ရှိပေမည်။ အရိုးရှင်းဆုံး ဆိုရပါမူ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် အလင်း၏ အလျင်ဖြင့် ယင်းကြယ်အနားသို့ တစ်ပတ်လှည့်ရန် ၇ နာရီကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး နေကို တစ်ပတ်လှည့်ရန်မူ ၁၄.၅ စက္ကန့်သာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
"The TYCHO Reference Catalogue" (1998). Astronomy and Astrophysics 335: L65. Bibcode: 1998A&A...335L..65H.
International Variable Star Index။ Detail for UY Sct။
"The atmospheric structure and fundamental parameters of the red supergiants AH Scorpii, UY Scuti, and KW Sagittarii" (2013). Astronomy & Astrophysics 554: A76. doi:10.1051/0004-6361/201220920.
"Silicate and hydrocarbon emission from Galactic M supergiants" (1998). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 301 (4): 1083. doi:10.1046/j.1365-8711.1998.02078.x.
Solar System Exploration: Planets: Sun: Facts & Figures။ NASA။ 15 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။